फेरि बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more फेरि बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ?
पुस १ गते, २०७७ - १२:१३
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्यमा प्रतितोला रु ८०० ले उकालो लागेको छ । पछिल्ला केही दिन झण्डैझण्डै स्थिर जस्तै रहेको सुनको मूल्यमा आज भने वृद्धि देखिएको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुन प्रतितोला रु ९३ हजार १०० मा कारोबार भएको छ । मङ्गलबार छापावाला सुन प्रतितोला रु ९२ हजार ३०० मा कारोवार भएको थियो । मङ्गलबारको तुलनामा प्रतितोला रु ८०० ले उकालो लागेको महासङ्घले जनाएको छ ।
पुस १ गते, २०७७ - १२:१३ मा प्रकाशित